Madaxwaynaha dowladda faderaalka Farmaajo oo kusii jeeda Caabudwaaq – Radio Daljir
Janaayo 20, 2018 5:36 b 1
Madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo socdaalo ku maraya gobolada kale duwan ee dalka ayaa maanta oo Sabti ah lagu wadaa inuu gaaro magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Madaxwaynuhu waxaa uu xalay ku hoyday magaalada Guriceel oo uu kulamo kula yeeshay maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada Caabudwaaq.
Madaxwaynaha ayaa uga mahadceliyay bulshada degmada Guriceel guulihii ay ka gaareen la dagaalanka Al-shabaab iyo daganaanshiyaha deegaankooda.
Magaalada Caabudwaaq ayaa waxaa laga dareemayaa maanta qabanqaabo soo dhoweyn aad u heer sareeya, wariyeyaasha radio Daljir ee Caabudwaaq ayaa kusoo waramaya ammaanka inay sugayaan ciidamada maamulka degmada , lana arkayo calanka Soomaaliya oo waddo kasta suran.
Madaxwayne Farmaajo ayaa socdaalkiisa gobolada waxaa uu yahay kii ugu horeeyey ee madaxwayne Soomaaliyeed ku maro gobolada dalka tan iyo markii Soomaaliya ay gashay colaadda iyo nidaamka dowlad la’aanta.